Pear "Elena": njirimara nke ọkwa na agrotechnology nke ịkụ - Ube - 2020
Kemgbe oge ochie, pear abụwo osisi osisi kachasị ewu ewu. Isiokwu a ga - enyere gị aka ịkwanye ube nke "Elena" dị iche iche n'enweghị nsogbu ọbụla ma nwee mkpụrụ osisi ya tọrọ ụtọ.
Atụmatụ kere ube iche "Elena"
Mgbe ịkụ ihe
Esi họrọ ma dozie ebe n'okpuru ube "Elena"
Nzọụkwụ-site-nzọụkwụ usoro akuku seedlings
Atụmatụ na-elekọta ube iche "Elena"
Esi mee ka pears na mmiri
Mgbe na otu esi ehicha pears
Mgbe owuwe ihe ubi na otu esi echekwa mkpụrụ osisi ugbo iche 'Elena'
Na-eguzogide nke ube iche "Elena" ka ọrịa na pests
Etu ube iche "Elena"
Pear "Elena" bụ oge oyi n'oge. Nke a bụ mkpụrụ osisi mkpụmkpụ osisi nke nwere okpueze pyramidal. Mkpụrụ osisi na-eto eto ruo 190 g, agba odo odo. Nri dị ụtọ na utoojoo na obere tart. Nmeputa site n'otu osisi - aka 40 kilogram. Nkọwa nke "Elena" dịgasị iche iche ga-enyere gị aka ikpebi ma ị ga-akụ ya n'ubi gị ma ọ bụ.
Ị ma? Ndị Gris oge ochie gbapụrụ na ọrịa ụfụ mgbe ha na-agafe oké osimiri site n'enyemaka nke pears. Ha nọgidere na-etinye uche na mkpụrụ nke mkpụrụ osisi ndị a na-atọ ụtọ, na ngosipụta nke ọrịa na-egbu egbu na-ebelata.
Ọ dịkwa mkpa ikwu banyere ndị na-ekpo ọkụ na pear. E nwere ọtụtụ mkpụrụ osisi dị iche iche nke dị mkpa ịkụnye ihe ndị ọzọ dị na mpaghara. Ha ga-emetọ ha.
Pear "Elena" adịghị mkpa pollinators. A na-akpọ ihe a onwe-ọmụmụ. Ya mere, ụdị dịgasị iche iche na-edozi mkpụrụ.
Dika osisi nile, otutu uzo di iche iche "Elena" nwere uru na odighi uru.
Nri uto nke nkpuru;
Iguzogide ntu oyi;
Iguzogide oria ojoo;
Ụdị mkpụrụ ahụ;
Echekwa ya na friji maka ọnwa anọ;
Mmetụta dị na klas a bụ obere:
N'okpuru owuwe ihe ubi buru ibu, mkpụrụ osisi ahụ abụghị otu akụkụ;
Nkeji oge oyi hardiness.
N'okwu a, ube "Elena" nwere uru karịa ụkọ, nke pụtara na ọ bụ ihe ezi uche ịkụ mkpụrụ osisi a ma nwee obi ụtọ na owuwe ihe ubi ahụ.
Ị ma? Ndị Chinese, na-ekwu "fen li", pụtara otu n'ime ihe abụọ: akụkụ ma ọ bụ ịkekọrịta ube. Ya mere, nkwenkwe ụgha nke oge ochie nke Chinese na-ekwu na ị nweghị ike ịkekọrịta ube, ma ọ bụghị nkewa agaghị ekwe omume.
Ube "Elena" kụrụ ma n'oge mgbụsị akwụkwọ ma ọ bụ mmiri. A ghaghị iburu n'uche na a na-eme ihe ọkụkụ n'oge ọkara nke ọnwa Ọktoba, tupu mmalite nke ntu oyi, na mmiri na-ada na njedebe nke April, mgbe frosts agafeela.
Okwesiri ighota na maka mpaghara ebe ndida nke mba na akwukwo ogwu bu ihe bara uru n'ihi na sapling nwere ike ghara igbanye mgbokorita n'oge okpomọkụ. N'ebe ugwu ka ekwesiri kutu ube na opupu ihe ubi, dika na oyi na-acho ohia ga-anwu.
Tupu akuku, họrọ ebe maka ube. Ọ ga-abụ anwụ na-acha, ma ọ bụghị ọkụ, ebe ọ ga-eburu n'uche na ikuku jupụtara na mmiri vapo ga-enwe mmetụta ọjọọ n'ahụ osisi ahụ ma ọ ga-amalite ịmị. N'ogige ahụ, a ga-akụ ube ma ọ bụ n'ebe ndịda, ma ọ bụ n'ebe ndịda-n'ebe ọdịda anyanwụ, ma ọ bụ n'akụkụ ọdịda anyanwụ.
Mmiri mmiri ekwesịghị ịdị elu karịa mita abụọ. Ala dị oke ala na-adịghị arụ ọrụ maka ube "Elena", ebe ọ bụ na ọ naghị anabata mmiri mmiri.
Anyị kpebiri na ọ na-enwe mmasị na ube, ya mere, anyị na-atụgharị na nkwadebe nke saịtị maka akuku.
Mmiri amalite itinye aka na ọdịda, ọ bụrụgodị na ha kpebiri ịkụ otu ube na mmiri. Nke a bụ n'ihi eziokwu ahụ na n'oge oyi, oghere ahụ ga-edozi, mgbe ọ kụrụ ya, ọ gaghị adị mkpa ichegbu onwe ya banyere "shrinkage" nke ala.
Ọ dị mkpa! Ịkpọkọta olu olu nke osisi ube bụ ihe na-ebibi.
Ọ bụrụ na ị kpebie kụrụ ube na ọdịda, ị ga-akwadebe ala otu izu tupu ị kụọ. Ihe omimi nke oghere na-adabere na mgbọrọgwụ nke seedling. O kwesịrị ịdị 50 cm, na ihe dị ka mita n'obosara.
I nwekwara ike igwu olulu miri. A na-eme nke a iji jupụta n'olulu ahụ na 3 cm nke ala na-eme nri, nke a ga-ejikọta ya na humus, ma ọ bụ peat, ma ọ bụ na superphosphate.
Ọ dị mkpa! Zere nri nitrogen, ọ nwere ike imetụta osisi osisi.
A na-atụba mkpọ n'ime etiti olulu ahụ, ebe ọ bụ na ube nwere ike ịghọ ntụpọ n'emeghị ihe nchebe. A na-atọpụ ala nke olulu, a na-emepụkwa oghere n'elu mgbidi nke oghere ahụ, nke ga-eme ka mgbanwe ikuku dịkwuo elu ma mee ka usoro mgbọrọgwụ ahụ too.
Ugbu a, ọ dị mkpa ịkọwa banyere ịgha mkpụrụ osisi n'ime oghere ahụ.
Ọ dị mkpa ịkwadebe seedling. Osisi ahụ gbanyechara mgbọrọgwụ siri ike ruo mgbịrịgwụ 12 cm ma bechapụ ya n'elu. Ugbu a na sapling bụ mkpanaka ogologo, a gha etinye ya na ịwụ mmiri maka otu elekere.
A gwuru ala site na olulu ya na udu n'ime oke nke 1: 1 ma gbanye ya mmiri. Nchịkọta nke ngwakọta kwesịrị ịdị ka oke ude mmiri. Diputa mgbọrọgwụ mkpụrụ na ngwakọta a.
Wepụ ụwa na ala nke onu ma dina iri ntan iri na ala. Mgbe ahụ, jupụta olulu ahụ na ngwakọta nke ụwa na uyi wee fesa ya n'ala akọrọ.
Anyị na-akụ osisi sapling. Ọ dị mkpa iburu n'uche na olu mgbọrọgwụ dị n'ogo nke elu ala ala. Ị nwere ike itinye mmanya na ala nke olulu ma ọ bụ mee akara na mkpọ. Nke a ga - enyere aka ịmepụta mkpụrụ osisi ahụ n'ụzọ ziri ezi, na-enweghị mmetụ mgbọrọgwụ mgbọrọgwụ.
A sị ka e kwuwe, anyị na-ejupụta ụwa iji mee ka osisi dị ike. Anyị na-etinye ọtụtụ àkwá na mpaghara ahụ. Mgbe nke a gasịchara, olulu kpuchiri ụwa "na mgbidi". Ugwu a ga-edozi mgbe a gachara mmiri.
Bee n'elu n'elu na ogige ubi ma ọ bụ ngwakọta nke ụwa na uyi.
A na-ejikọta gbọmgbọm ahụ na peg, mana ọ bụghị ịdọrọ.
Osisi a kụrụ osisi na-agbanye mmiri abụọ.
A na-agba gburugburu Pristvolny na peat, sawdust, compost ma ọ bụ akwụkwọ.
Osisi na-enye osisi ahụ nri ruo ogologo oge, ị nwere ike ichefu banyere nri n'oge.
Ọ dị mkpa! Achịcha zuru ezu nwere ike dochie ya na egg shells.
Mgbe ịgha mkpụrụ kpara kwesịrị ịhụ na ị ga-elekọta osisi ahụ. E kwuwerị, nke a bụ mmesi obi ike nke oke owuwe ihe ubi.
Dịka e kwuru na mbụ, osisi ahụ hụrụ mmiri n'anya, n'ihi ya, i kwesịrị iche echiche banyere usoro ịgbara mmiri mmiri, "Helena". Best - sprinkling. Ya mere, mmiri na-abanye osisi ahụ dum site na obere oghere.
I nwekwara ike ime ka obere mmiri mmiri 12 na gburugburu ube. A gha ịmegharị ọtụtụ ugboro n'oge okpomọkụ na mmiri. Ọ bụrụ na ọ dị ọkụ, ọ dị mkpa iji mmiri na-aṅụ ube mgbe mgbe.
Ihe kachasị mkpa bụ icheta na osisi chọrọ ezigbo mmiri, ma ị kwesịghị ichefu oge oyi oyi nke ube "Elena". Ọ bụrụ na osisi ahụ enwetaghị mmiri kwesịrị ekwesị n'oge okpomọkụ ma nye ezigbo owuwe ihe ubi, ọ pụtara na osisi ahụ adalata. Osisi ndị a adịghị eguzogide ọgwụ na ntu oyi.
Ị ma? N'ụzọ dị ịtụnanya, ube dị nro na nke na-atọ ụtọ na-enyere aka mee ka ezé gị sie ike. Ọ bụ ihe gbasara anụ ọkụ. Pear nwere calcium na ahihia, nke, na-emekọ ọnụ, na-eme ike enamel.
Uwe elu kachasị mma bụ otu n'ime isi nzọụkwụ dị elu nke anụ ọhịa Helena.
Iji chọpụta ihe ịkwesịrị ịkụ osisi ahụ, ịnwere ike ile anya n'ọdịdị ya.
Ọ bụrụ na akwukwo ube na-ele anya n'okpuru, ọ pụtara na osisi enweghị nitrogen;
Ịka nká na mbenata na nkwụsị nke ntu oyi bụ ihe àmà nke ụfe nitrogen;
Ọdịda nke Ome na akụkụ ala nke osisi na njigide nke buds buds bụ enweghị phosphorus.
Agba aja aja nke epupụta na nchịkọta ngwa ngwa ha bụ ihe ịrịba ama nke ụkọ potassium;
Ọ bụrụ na akwụkwọ na-apụta na epupụta, nke na-eduga n'ọnwụ nke ebe ndị a, ọ bụ enweghị calcium.
Ịkwesịrị ịzụta ube kwa oge, n'ihi na osisi ahụ ga-enweta ezigbo nri. Na-arụ ọrụ na fatịlaịza kwesịrị ekwesị na-aghọ mgbe niile.
Ọ dị mkpa! Fụziere mkpụrụ osisi ahụ ma ọ bụrụ na ọ na-etolite n'ala dị mma.
Mbelata nke ala ndị bara ụba kachasị mma nwere ike imetụta ọganihu na ike. Maka iji ihe eji eme ihe di iche iche dabere na ube.
Ụfọdụ ndị na-elekọta ubi na-enye onyinye n'ime ọdịda. Nke a na - enye gị ohere ịkwadebe ube maka oyi ma nye ala niile nri maka oge oyi. Omume mgbakwunye mgbụsị akwụkwọ mgbe owuwe ihe ubi.
Ndị ọzọ na-elekọta ubi na-etinye fatịlaịza na mmiri. A na-eji nri a eme ihe maka mweghachi nke osisi site na ịba jijiji.
O nwere ike iji nwayọọ kwadebe maka oge na-eto eto. Ọ na-enye aka ịkwalite mma owuwe ihe ubi n'ọdịnihu.
Ị ma? Otu ube nwere pasent 20 nke eriri ahụ kwa ụbọchị, pasent 10 nke vitamin C na pasent 6 nke potassium.
Iji chọpụta ụdị fatịlaịza, i kwesịrị ịdabere na paragraf ndị a:
Oge nke afọ;
Na mgbụsị akwụkwọ, potash na phosphate nri na-ẹkenam. A na-ekesa ha na gburugburu nke akwụkwọ ahụ ruo mita 45 cm. A na-etinye nri ndị dị otú ahụ n'afọ 5 ọ bụla. A na-agbatị dose nke fatịlaịza na-adabere na afọ nke osisi ahụ na uru dị mma nke ala. Organics na-etinye n'okpuru osisi kwa afọ abụọ. Nitrogen fatịlaịza na-emeziwanye uto na fruiting nke pears.
I kwesịghi ichefu nri nri foliar. Fatịlaịza bụ ihe ngwọta nke nri. Ọ mejupụtara 2% ngwọta nke potassium sulfate.
Ihe ngwọta nke urea kwesiri ka a ghagharia ube ubochi iri mgbe okuku. Tinyeghachi ọzọ mgbe izu abụọ gasịrị.
Ị nwere ike iji ntanetị dị mgbagwoju anya, dịka ọmụmaatụ, ammophos, nitrophos, nitrophoska na nitroammophos.
Na mgbakwunye na ndị na-eri nri na-eme ka micronutrient fatịlaịza. Site n'enyemaka ha, a na-eji ígwè, manganese, zinc, wdg. Họrọ ha dabere na mejupụtara ala.
I nwere ike ime nri nke nwere phosphorus, nitrogen na potassium.
Ọ dị mkpa! Kpachara anya na ihe ndi ozo, dika o nwere ike iduba n'osisi oku.
A na-arụ "Elena" ube kwachaa na mmiri, okpomọkụ na oyi. Usoro a na - eme ka mkpụrụ osisi ahụ dịkwuo mma, na - achịkwa mkpụrụ osisi na eto nke osisi ahụ, na - eme ka ọkụ dị ọkụ. Kwachaa na-enyere aka na eto osisi ị chọrọ ịmalite na ogwe siri ike nke nwere ike iguzogide nnukwu ibu ihe ubi.
Mmiri kwachaa ka a na-emechaa mgbe frosts dị oké njọ.
Jiri ncha na-egbu egbu maka usoro a. Maka nnukwu osisi dị mkpa iji hacksaw. Mgbe e bechara ya, a na-aṅụ mmanya na-aba n'anya.
A na-eme ka ogwe osisi dị mkpirikpi site na nke anọ. Nke a ga - enye ohere ịmepụta iko nke pear n'ọdịnihu.
A na-emegharị nsị na okpomọkụ nke dị ala karịa Celsius 5 .
Mgbe usoro ahụ gasịrị, a gwakọtara mpekere ndị ahụ na nchịkọta ndị a: mmanụ a gwakọtara, mmanụ a na-ete mmanụ, ogige ubi na Rannet.
Enwere ụzọ abụọ ị ga-esi egbutu ya. Nke mbụ: egbutu ala n'alaka ụlọ ọrụ ahụ. Ka ị ghara imebi ogbugbo ahụ, a na-egbutu osisi ahụ na ala, wee - nnukwu isi gash. Nke a na-acho acceleration nke uto nke Ome mpụta na edemede nke buds ndị dị n'okpuru ala. Tupu oge opupu ihe ubi na-agbachachaa, a machibidoro ya iji nitrogen nri.
Ntucha nke osisi ga-ekwe ka ube malite ịba ụba n'ubi, ebe ebe niile ga-eto.
Okpokoro oge okpomọkụ bụ ụdị ncha. N'oge ọkọchị, a na-ewepụ osisi Ome na-eto n'elu.
Ugbu a, ọ dị mkpa ịtụle mgbe ị ga-atụgharị na ihe ga-abụ mmeghachi omume nke ube:
Ntinye na june. Ụdị dị otú ahụ na-eduga na oge na uto nke Ome, ma ọ na-eme ka ọ bụrụ usoro ọhụrụ. Ọ dị mkpa icheta na ntụtụ na-emetụta oge na-eto eto nke pears, nke a na-emetụta oyi.
Pinyere na njedebe nke attenuation. Ọ mma maturation nke Ome.
Anyị anaghị akwado oyi kwachaa, ebe okpomọkụ dị njọ na osisi ahụ. Alaka enweghị oge iji gwọọ ma nwụọ site na ntu oyi.
A na-eme ụdị nke a site ná mmalite nke November ruo March, n'ihi na n'oge a, osisi ahụ zuru ike. A na-eme ụdị nkechaa ya na pruner. Wepụ obe, ike, alaka nwụrụ anwụ.
Maka ịgha nnukwu alaka ị ga-emeghe n'etiti osisi ahụ. A na-achọchaa oge oyi nanị ma ọ bụrụ na ịchọrọ iwepụ osisi dị elu ma wepu alaka ndị na-agbasa. Iji hụ na mpekere gwọọ ngwa ngwa ma ghara ifriizi na oyi, jiri stuner prumer na, mgbe ọ kwachaa, na-emeso mpekere na ogige ubi.
Ị ma? Na Europe, a na-ese fatịlaịza pear, na mgbe ahụ ka ụtaba bịara.
Ọtụtụ ndị na-elekọta ubi na-eji àgwà ndị a na-amalite ịmalite mkpụrụ osisi pear:
Ike mgbakwunye Fetal;
Ụcha, uto na ekpomeekpo nke pulp.
Ị nwere ike were ube n'aka gị ma tụgharịa ntakịrị. Ọ bụrụ na a na-ekepụ ube ozugbo site na alaka ụlọ ọrụ - ị nwere ike ịmalite ihe ubi. Ọ bụrụ na ube ka na-ejide, oge ahụ erubeghị.
Pears a na-ewe ihe ubi "Elena" dị na October. Ya mere, malite na ọnwa a, ị nwere ike ịmalite ịlele pears maka ịkọ ihe na owuwe ihe ubi.
Mgbe ị chịkọtara pears ahụ, ha kwesịrị itinye ya na ebe gbara ọchịchịrị na ebe dị jụụ maka ripening. A ghaghị ibute ebe dị otú a ma kwupụta ya.
N'ime ime ụlọ a, ịchọrọ ịnọgide na-enwe okpomọkụ na iru mmiri. Na oyi, okpomọkụ kwesịrị ịdị elu ruo 3 Celsius C, na iru mmiri nke ụlọ - 85%.
Oké mmiri ma ọ bụ okpomọkụ na-eme ka pears gbanwee ngwa ngwa. Ọ bụrụ na okpomọkụ dị ala, ikuku na-akpọnwụkwa, pears na-adaghasị ma na-efunahụ ha.
A na-etinye pears na igbe pụrụ iche, dị ka nchekwa na ala na-eduga na rotting. E kwesịrị ikpo igbe dị mma. N'oge oyi, ịkwesịrị ịkwado shelves. A na-etinye ụrọ n'elu ha ma tinye ya na ibe.
Ọ dị mkpa! Ejila mkpụrụ osisi ndị ọzọ a kụrụ n'akụkụ pears.
Wepu pears na-ere ure.
Pear "Elena" na - eguzogide ọrịa dị iche iche, karịsịa skaab ma obu Septoria.
Ọrịa na-acha ọbara ọbara (na-emetụta akwụkwọ na mkpụrụ osisi, mgbe ụfọdụ, ọrịa cortex, nke bụ ụdị dị ize ndụ);
Mkpụrụ osisi (na-egosipụta n'onwe ya n'ụdị ire ere na mkpụrụ, ọ gbasara ngwa ngwa).
Aphid (na-eduga ná mbibi nke akwụkwọ na mbibi ngwa ngwa ha);
Mkpụrụ ube (na-ebelata ogo nke osisi dum ma rie pịp nke ube si n'ime);
Ube nke ube (akwukwo gbanye aja aja, igbapu ma nwua).
Ọrịa cancer Ná mmalite oge opupu ihe ubi, whitewash na ukwu. Kpoo akwukwo ndi ozo na mmiri Bordeaux. Kpochapụ mkpụrụ osisi dara ada na mkpụrụ osisi rere ure.
Mkpụrụ osisi ire. Ugboro abụọ kwachaa na mwepụ nke ihicha na alaka nwụrụ anwụ na mkpụrụ rere ure.
Green aphids. Ị nwere ike itinye ntụ ọka ash na ncha. 300 g nke ash na-sie na 10 lita mmiri na 40-50 g ncha na-agbakwunyere.
Akwa ube. Wepu n'etiti ahịrị na osisi okirikiri. Mee ya na mmiri na ọkọchị. A pụkwara iji ọnyà Pheromone mee ihe. Na-agbachaa kwachaa Ome. Enwere ike jikwaa kọmputa.
Pear mite Ghọta ihe dara ada na mebiri emebi ahihia. Enwere ike itinye spraying - 0,2% Decis na Inta-Vir.
Ị ma? Na narị afọ nke 18, a na-akpọkwa ube "mkpụrụ osisi mmanye" n'ihi na ọ dị nro, ederede mmanu.
Helena Pear nwere àgwà dị mma karịa ihe ọjọọ. Ya mere, ọ bụrụ na ịchọrọ ịmị mkpụrụ mkpụrụ osisi nke mkpụrụ osisi dị nso na Afọ Ọhụrụ, e mepụtara ya maka gị.